“ANTSIKA HISÔMA AN-DAKORO 2018” :: Manomana karazan-dalao maro ho an’ny ankizy ny IKM Antsahavola • AoRaha
“ANTSIKA HISÔMA AN-DAKORO 2018” Manomana karazan-dalao maro ho an’ny ankizy ny IKM Antsahavola
Tolotra ao anatin’ny fotoam-pialan-tsasatra. Maro amin’ny ankizy no mbola ao anatin’ny lalao eo am-piandrasana ny fidirana. Ho fanomezana fahafaham-po faradoboka ho azy ireo dia manomana hetsika ny Ivon-toeran’ny Kolontsaina Mala­gasy (IKM) Antsahavola, manomboka rahampitso alakamisy ary tsy hifarana raha tsy ny sabotsy 15 septambra izao. “Antsika Hisôma An-dakoro 2018”, ny anarana saloran’ity sehatra ahitana lalao sy fifaninanana ho an’ny ankizy ity. Natao hamerenana indray ireo lalao fanao fahiny, mampiray hina sy mitaiza ny saina ho tia karokaroka izy io. Natokana indrindra ho an’ ireo zaza 7 taona hatramin’ny 17 taona ny hetsika.
Karazan-dalao maro no holalaovin’izy ireo mandritra izany, raha tsy hitanisa afa-tsy sabaka, tsobato, katro sy ny maro hafa. Hisy koa ny fifaninanana hazakazaka kodia­rana, fifaninanana tsikonina, baolina kitra ho an’olona telo ary fifaninanana taovolo mala­gasy. Maro ny loka hozaraina, mandritra izany. Ankoatra izay, hisy sehatra misokatra amin’io fotoana io ho an’ireo talenta vao misondrotra.
Tsara ny manamarika fa mbola misokatra ny fiso­ratana anarana eny amin’ny IKM Antsahavola anio, ho an’izay mikasa ny handray anjara amin’ny fifaninanana sy ny sehatra misokatra. Tsiahivina fa efatra taona izao no nikarakaran’ny IKM ity hetsika ity. Ny 26 jona, ny fialan-tsasatra lehibe ary ny Noely no hanatanterahan’izy ireo izany. Manamarika ny fahadimy taona niorenany rahateo ny IKM amin’ity taona ity ka hisy ny hampiavaka azy amin’ io hetsika io.
ALIM-PIKORANANA :: Hitondra “Takariva miavaka” i Njakatiana
MOZEA AN’I QUAI BRANLY :: Kanto malagasy eninjato mahery aranty any Frantsa